Nahatsiaro ireo lasibatra miisa 20 eo fa misy zavatra tsy rariny, ka nampiakatra ny raharaha teny amin’ny Filankevi-panjakana eo anivon’ny Fitsarana tampony teto Antananarivo, ary nahazo rariny sy honerana 40 tapitrisa ariary. Efa misy fampahafantarana nataon’ny vadin-tany mahakasika an’io, saingy tsy mety manatanteraka ity ben’ny tanàna MAPAR ity, raha ny fampitam-baovao. Nandefa taratasy “ST N°557” indray ny Fitsarana ambaratonga voalohany ao Mahajanga ny 8 mey miantefa amin’ny Commusariat Central ao Mahajanga hampanao fanadihadiana ity ben’ny tanàna ity noho ny tsy fanatanterahana didim-pitsarana, saingy in-telo nantsoina izy tsy nipoitra, hoy ireo lasibatra. Toa miantehitra fa harovan’ny filoha sy akaiky azy ? Tokony hosamborina ny ben’ny tanàna raha ny hevitr’izy ireo, izay hanairany ny eo anivon’ny minisiteran’ny filaminana anatiny hanome baiko satria ny lasibatra efa tamin’ny 1 jona no nohadihadiana. Miantso ny fitsarana mba hamindra ny raharaha ho eny amin’ny zandarimaria ihany koa izy ireo rehefa tsy sahy misambotra ity Ben’ny tanàna ity ny polisim-pirenena. Mitaky ny fampandehanana ity raharaha ity mialoha ny fifidianana ben’ny tanàna izay efa ny volana oktobra ny lasibatra, ary mampahatsiahy fa tsy misy ambonin’ny lalàna eto. Fanoherana didim-pitsarana no hanasokajian’izy ireo izao, koa miantso ny minisiteran’ny Fitsarana handray andraikitra ireo mpiasa.